Fedora ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - Applications များကိုဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း (GPK-Application and Apper) | Linux မှ
Fedora ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - Applications များကိုဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း (GPK-Application and Apper)
Perseus | | GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
များသောအားဖြင့် GNU / Linux သုံးစွဲသူများသည်“အတွေ့အကြုံ“ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ (ဒါမှမဟုတ်သိချင်စိတ်ရှိသူတွေ) ကိုမှားယွင်းတဲ့အမြင်နဲ့မျှဝေဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ငါဘာကိုဆိုလိုလဲ။ ကျွန်တော်တို့အများစုသည် Terminal, console, tty သို့မဟုတ်၎င်းတို့အားခေါ်ဆိုလိုသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုလိုကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သော၊ မြန်ဆန်။ စွယ်စုံသုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတွေးတောဘဲသူတို့ကိုတွန့်သည်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးသည်ဟုမစဉ်းစားတော့ပါ။ သို့မဟုတ် GNU / Linux တွင်အရာအားလုံးသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည်။ ဂန္ထဝင်ဥပမာတစ်ခုမှာ -
"ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင် "solitaire" ကိုတပ်ဆင်ရန် terminal ကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရမည်နည်း။ အခြား operating system များမှာ X file ကို double click လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုပေးဖို့လုံလောက်တယ်။ ငါအရာအားလုံးကို graphically လုပ်နိုင်တယ်။ "Linux" မှအရာအားလုံးသည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောနေရာ၌ကျွန်ုပ်နေလိုသည်"။
ဤမှတ်ချက်များသည်ပင်ဂွင်းနှင့်ပတ်သက်သောဘလော့ဂ်အမျိုးမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ပေါင်မုန့်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူကဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူမှားလဲ၊ ဘယ်သူမှားလဲဆိုတာကိုငြင်းခုံဖို့ကျွန်တော်မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ဤပို့စ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတိအကျပြရန်ဖြစ်သည်။ GNU / Linux တွင်သင်သည် terminal ကိုအသုံးမပြုဘဲဤအခြေခံကျသောအရာများကိုသရုပ်ဖော်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်မည်နှင့်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုသည်အခြေအနေတစ်ခုအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူ။ လက်တွေ့ကျမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Fedora မှာကျွန်တော်တို့မှာ graphical interface ကိုသုံးတဲ့ package manager တွေရှိတယ်။ gpk- လျှောက်လွှာ Gnome, XFCE နှင့် LXDE တို့အတွက်ဖြစ်သည် apper ပါ KDE အဘို့။ အဘယ်ကြောင့်ဗားရှင်း ၂ လုံးရှိသနည်း။ Gnome, XFCE နှင့် LXDE တို့သည်စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးသောရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည် GTK + နှင့် KDE စာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုသည် QT (တစ်ယောက်ယောက်ကဒီအကြောင်းကိုပိုသိချင်ရင် - GTK +, QT) ။ အထုပ်နှစ်ခုလုံး၏မန်နေဂျာများ၏လုပ်ဆောင်ပုံသည်အလွန်ဆင်တူသည် ဘယ္လို gpk-application နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။ Apper သုံးစွဲသူများ (KDE)၊ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအယူအဆများသည်သင်၏လျှောက်လွှာမန်နေဂျာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ )
Packages များကို gpk-application (Gnome, XFCE နှင့် LXDE) မှစီမံခြင်း
gpk-application သည်ဤ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သုံးခု (၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာများကိုမရေတွက်နိုင်သောfor.¬) အတွက် default package manager ဖြစ်သောကြောင့် Gnome မှ၎င်းကိုမည်သို့ရယူရမည့်နည်းလမ်းများစွာ၏ဖန်သားပြင်များကိုထည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ XFCE နှင့် LXDE သည်အခြားသူများအကြား :(၊ ပိုမိုလက်တွေ့ကျစေရန်အတွက် application launcher ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ, ငါတို့လျှောက်လွှာမန်နေဂျာကိုဝင်ရောက်ဖို့ကျနော်တို့နှိပ်: alt + F2 ပြီးတော့ငါတို့ရေးမယ်
နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Enter ကို နှိပ်၍ အောက်ပါပုံကဲ့သို့ပေါ်လာလိမ့်မည် -
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application manager ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဲကြည့်ရအောင်။
ပြတင်းပေါက်၏ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ package သို့မဟုတ် applications များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်အမည်ကိုသာရေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုး၏ဤအပိုင်းတွင်အမည်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အစုများစာရင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးစာသားနေရာတွင်ရေးထည့်ထားသောဖော်ပြချက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုး၏ဤအပိုင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ package များကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်စီစစ်နိုင်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြစို့။
Package collection များကို
ဤနေရာတွင်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်သောအစုအဝေးတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာ - စာအုပ်များနှင့်လမ်းညွှန်များ၊ Design Suite စသည်တို့။ မှတ်သားသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စုဆောင်းမှုတစ်ခုတပ်ဆင်ပါကထိုစုဆောင်းမှုအတွင်းရှိပါ ၀ င်သည့် pack များကိုအားလုံး install လုပ်လိမ့်မည်။
အသစ်သော packages များ
ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောလတ်တလောအစုများကိုတွေ့မြင်ရန်ခွင့်ပြုသည် software ကို repositories က.
ရွေးချယ်ထားသော packages များ
ဤရွေးစရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းမှုသို့မဟုတ်ဖြုတ်တပ်မှုမပြုလုပ်မှီကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့် package များအားလုံးကိုပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သို့ပြောင်းလဲမှုများမပြုလုပ်မီအတည်ပြုရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
၀ င်းဒိုး၏ဤအပိုင်းတွင်အမျိုးအစားများခွဲခြားထားသောအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် web browser ကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်အင်တာနက်အမျိုးအစားသို့ ၀ င်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော package များကိုပြရန် ကြောင်းအမျိုးအစားသည်။
ပြတင်းပေါက်၏ဤနောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအထုပ်၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒေတာများကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်မည်သည်၊ မည်သည့်အုပ်စုနှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ လိုင်စင်အမျိုးအစား (GPL၊ BSD၊ ပုဂ္ဂလိကစသည်ဖြင့်) ။ အဲဒါကိုပိုင် repository ကိုအတူတူပင်။ ဤကိရိယာအားလုံးသည်ဥပမာတစ်ခုနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်သည်။ ) ။
အထက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အညီ၊ သင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအချက်အလက်များအားလုံးကိုစာဝှက်နိုင်သည်။ Firefox အထုပ်ကိုအမှတ်အသားပြုပုံပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ အထုပ်အမှတ်အသားပြုသည့်အခါကောင်းပြီ၊ ၎င်းကိုထည့်ပြီးပြီဟုဆိုလိုသည်။
packages များသို့မဟုတ် applications များထည့်သွင်းခြင်းနှင့် uninstall
package များသို့မဟုတ် applications များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ system ထဲတွင်တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမည်မှာ - package package အား name-description ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးအစားအလိုက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ package manager တွင်စာရင်းပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှာဖွေရမည်။ အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါမည်
ပုံတွင် + သင်္ကေတသည်အပြာရောင်ဖြင့်ပေါ်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိနိုင်သည်။ ဤညွှန်ပြချက်သည်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းဖော်ပြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်စီစဉ်ရသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကမျိုးစုံရှာဖွေခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင် package များစွာကိုရွေးနိုင်သည်၊ ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် app တစ်ခုထက်ပိုထည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသော application များကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ aplicar.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်မည့် package (s) သို့မဟုတ် application (မ်ား) သည်အပိုမှီခိုမှုလိုအပ်လျှင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည့်အောက်ဖော်ပြပါပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ငါတို့တွန်းတယ် ဆက်လုပ်ပါ တပ်ဆင်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်နောက်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုရေးထည့်ပါလိမ့်မည်။ ပြီးပြီဆိုလျှင် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
သင်သတိပြုမိသည့်အတိုင်းဤအထုပ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းတိကျစွာညွှန်ပြသည့်အမှိုက်ပုံးပုံစံအိုင်ကွန်တစ်ခုပေါ်လာမည်။ ဆက်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပါ aplicar နှင့် uninstallation ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စုတစ်ခုအနေနှင့်သင်တို့အချို့ကခလုတ်သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ သန့်ရှင်းသော ပြတင်းပေါက်ကမန်နေဂျာလား ဤခလုတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ application manager တွင်စီစဉ်ထားသောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုမီကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားထားသောသို့မဟုတ်ညွှန်ပြထားသောအပြောင်းအလဲများအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ရန်သည်အပြောင်းအလဲများကိုမသိမ်းဆည်းဘဲဖိုင်တစ်ခုကိုပိတ်ခြင်းနှင့်ညီမျှလိမ့်မည်။ )
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Fedora ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - Applications များကိုဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း (GPK-Application and Apper)
ဂရပ်ဖစ်တွေကို install လုပ်ဖို့ application ကိုကျွန်တော်သုံးလေ့မရှိပါဘူး၊ အရမ်းကိုနှေးကွေးပြီးသဘောမပေါက်ပါဘူး၊ တခါတရံသင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသင်မသိဘူး၊ တိုးတက်မှုလည်းမရှိ၊ ဘာမှမရှိဘူး။
ငါ yum သုံးစွဲဖို့ console ကအားဖြင့်ကြိုက်တတ်တဲ့
ကျနော်တို့က2ရှိပြီးသားအများအပြား XD ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ yum သည်ကျော်လွှား။ မရနိုင်သော်လည်းအချိန်ကာလအားဖြင့်သင်နောက်ဆုံးပေါ်အသစ်များကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ) ။
မင်္ဂလာပါ bro :) ။
ဟုတ်! တကယ်တော့ကျနော့်ထင်မြင်ချက်ကတော့ငါဟာ console ကိုအသုံးပြုတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့က GUI ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သင့်တယ်
Virtual Box ကို install လုပ်တဲ့အခါသူက linux kernel ကိုရှာလို့မရဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ပြခဲ့တဲ့ဒီ application က oracle စာမျက်နှာကိုမထုတ်ဘဲမထည့်သွင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မှားတာလဲ။ ငါ VM လိုတာဒါကြောင့် ubuntu ကိုပြန်သွားရမယ်: p
sabayon မှာငါထပ်တူပြproblemနာရှိခဲ့ရင်ဒီဖြေရှင်းချက်ကငါအတွက်အဆင်ပြေမှာလားဒါမှမဟုတ် fedora အတွက်လား။
Fedora 16 နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတာက 'glchess' ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါငါကကွန်ပြူတာနဲ့ကစားဖို့ configure လုပ်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမကစားတဲ့အချိန်မှာ moved moved ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး fedora 17 မှာဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုတာပါပဲ။
Yumex ပျောက်နေတယ်၊ ​​အမှန်တရားကအရမ်းကိုကောင်းနေတယ်။
Phanter ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ yumex ကို ၀ င်လိုက်တယ်၊ အချိန်အတော်ကြာသုံးပြီးငါနဲ့အရမ်းတော်တယ်။ ဖိနပ်တွေညှစ်တဲ့အခါငါ yum နဲ့ console ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာကိုဝန်ခံရမယ်
ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်၎င်းကို "Apply" ပေးပါ။ ၎င်းသည် "စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တန်းစီ" - "သတင်းအချက်အလက်ကို repository မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း" - "Resolving dependencies" ထွက်လာသည်။ progress bar သည်စတင်ပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီးမည်သည့်အရာမျှတပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ။ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲသိလား။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာရှိအဆင့်များကိုလိုက်နာနေပါသည်။ http://www.howtoforge.com/the-perfect-desktop-fedora-17-p3
ဘယ်အထုပ်ကိုတပ်ဆင်မလဲ။ ငါအချို့သော repository မှာအမှားတစ်ခုကြောင့်, ဖြစ်သင့်ဖြစ်မည်ဟုထင်, သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကောင်းစွာလိုက်နာလျှင်စစ်ဆေးပါ;) ။
တကယ်တော့ငါကအားလုံးကိုအားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်း install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​hehe၊ ဒါကသူတို့ပြောတာတွေကြောင့်လား၊ မနှေးဘူး၊ အလွန်နှေးနေတယ်၊ ​​ငါသူတို့ကိုတစ်ဖွဲ့ချင်းစီ (သို့) သေးငယ်တဲ့အုပ်စုတွေမှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်။
တကယ်တော့ banshee နဲ့ azureus လိုမျိုး package တွေရှိတယ်၊ ငါ့ကိုသူတို့ကို install လုပ်ခွင့်မပြုဘူး၊ ငါကြိုးစားခဲ့တာ၊ ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး၊ ဘာမှမပြော၊
ဟေ့ ... မင်း Fedora အကြောင်းပိုမတင်တော့ဘူးလား။
Perseus ဟာ Fedora ကိုသုံးတဲ့သူပါ။ သူဟာလအနည်းငယ်အကြာမှာသူကဒီကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့သူ့ဆီလာမလာအောင်တားဆီးပေးတဲ့ပြproblemsနာအချို့ရှိပါတယ်။
Francisco Villavicencio ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် Fedora 19 ကိုစပိန်လိုသုံးပါတယ်
ငါ "yum install pgadmin3" ကိုသုံးပြီး pgAdmin3 ကို install လုပ်ခဲ့ပေမယ့် interface ကိုဒီနေရာမှာငါမသိသောဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
Francisco Villavicencio ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ "yum install pgadmin3" ကိုသုံးပြီး pgAdmin3 ကို install လုပ်ခဲ့ပေမယ့် interface ကိုကျွန်တော်မသိသောဘာသာစကားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည် (ဂျာမန်တစ်ဝက်၊ ပြင်သစ်တစ်ဝက်၊ ပေါ်တူဂီတစ်ဝက် ... ) ဒါကြောင့် qpk-application ကို အသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်ကို uninstall လုပ်ချင်သည်။ pgk … application ကိုစဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာမည်ကိုရေးထည့်ပါ။ ငါ "pgadimin3" ရိုက်ခဲ့တယ်။ ကွန်ပြူတာကထာဝရအိပ်ပျော်သွားပြီးဘယ်ရလဒ်မှမရခဲ့ဘူး။
ငါ pgk ကို download လုပ်ပြီး upload လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါလည်း install လုပ်ခဲ့ပြီးသော "postgresql" ကိုကြိုးစားခဲ့သည်။
pgk-application package ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူး
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - အဓိက desktop ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု